Trotter frantsay na soavaly lasely | Soavaly Noti
Karazan-tsoavaly Soavaly fitetezana tratra na soavaly frantsayVolo avy any Frantsa izy io ary io indrindra no ampiasain'ny ekipa nasionaly amin'ny fifaninanana ataon'izy ireo. Noho izany dia miresaka karazana iray manana ny lazany eo amin'ny firenena Gallic isika. Ny fahaizany dia azo jerena ao amin'ny Hippodrome de Vincennes, France, ho toy ny làlana fampirantiana lehibe indrindra amin'ireo fifaninanana.
Ny Trotter frantsay dia niandoha tany Normandy tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary ny taranany dia avy amin'ny English Thoroughbred sy Norkfolk Trotter, malaza amin'ny hafainganam-pandehany sy ny fahaizany mamaky trotting.
Ireo hazakazaka ireo aorian'ny niampita niaraka tamin'i Norman mares izy ireo izay niafara, voalohany, ilay soavaly soavaly ary avy eo tany amin'ny Trotter frantsay niaraka tamin'ny Anglo-Norman, amin'ny ankapobeny dia volavolan-tsoavaly. Ny lakroa isan-karazany koa dia natao tamin'ny soavaly Anglo-Arabo mba hamokarana karazana fanoherana, mailaka ary haingana.
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-1940 dia voasoratra anarana ho toy ny karazany ofisialy ary navela ny fisoratana anarana ny mpitaingina zaridaina, saingy tamin'ny taona XNUMX no nampiatoana izany ho an'ireo rehetra izay tsy voasoratra ara-dalàna ny ray aman-dreniny. Tamin'ny 1836 ny fampiharana voalohany ho an'ity fanatanjahantena ity dia natsangana tao Chesburg. Ny vokatry ny fitiavam-bidy dia ny hazakazaka frantsay Trotter.
Soavaly indrindra ny French Trotter miavaka amin'ny fitsambikinana amin'ny alàlan'ny fahaizany mamorona sy ny fahaizany. Ny sampana rehetra amin'ireto soavaly ireto dia samy hafa karazana avokoa na dia mitovy aza ny itovizany. Manana loha mitovy amin'ny an'ny Thoroughbred izy, na dia nidina avy tamin'ny soavaly Anglo-Norman aza.
Manana vatana malalaka sy mivoatra izy ireo, miaraka amin'ny lamosina sy soroka matanjaka ary manana hozatra ambany mankany ambany noho ny fivoaran'ny evolisiona, lava sy matanjaka ny rantsam-batana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly fitetezana tratra na soavaly frantsay
Fiofanana amin'ny mpitaingina sy fiomanana ara-batana